Vaovao - Nantsoina ny vondrona NEWYEA hanatrika ny Fivoriana an-tampon'ny Internet of Things Wind Direction 2021 an'ny Carbon Zero mba hiresaka momba ny fotoana vaovao hivoaran'ny orinasa maitso
Charger mode 2
Wireless Charger EV
3.7KW Wireless Charging System Ho an'ny Fiara
7KW Wireless Charging System Ho an'ny Fiara
Wireless Charger miaraka amin'ny herinaratra ambany
Charger Wireless Wireless
Herinaratra finday avo roa heny
Herinaratra azo fehezina Wireless Charger
Charger tsy misy tariby miaraka amin'ny boaty fanamafisam-peo
Chip famahanana tsy misy tariby
15W Wireless Charger mpandray
5W Chip fandefasana, Coil tokana
Fanamarihana & Patent
NEWYEA Group dia nasaina hanatrika ny Fivoriana an-tampon'ny Internet of Things Wind Direction 2021 Carbon Zero Summit mba hiresaka momba ny fotoana vaovao hivoaran'ny orinasa maitso
Tamin'ny 8,2021 jolay, ny "2021 Internet of Things Wind Direction Carbon Zero Summit", notarihin'ny Vaomieran'ny fampandrosoana sy fanavaozana Xiamen ary ny Birao indostrialy sy ny informatika Xiamen, ary notohanan'ny Ivotoerana fikarohana momba ny harena voajanahary fahatelo sy ny fikambanana. Komitin'ny Internet International of Things Expo an'ny China, dia natao tao Xiamen. Dr. Lin Guijiang, filohan'ny Xiamen NEWYEA Group, dia nasaina hanao kabary ifotony ary niara-nivory tamin'ny manam-pahaizana momba ny AloT, angon-drakitra lehibe ary fampiasam-bola indostrialy hanao fifanakalozan-kevitra mifandraika amin'ny "fampiroboroboana ny fanovana toekarena sy ny fanokafana toekarena aotra-karbaona" ary niresaka momba ny fotoana vaovao azon'ny orinasam-pifandraisana AloT eo ambanin'ny lasibatry ny lasibatra "karbaona roa" ao Shina.
Nandritra ny fihaonana, Dr. Lin Guijiang, miaraka amin'ny lohahevitra "Carbon Zero Smart Energy Technology Innovation", dia nanolotra ny andraikitra amin'ny fampihenana ny famoahana ny emission sy ny tsena lehibe azon'ny indostrian'ny fiara eo ambanin'ny tanjona roa-karbaona. Nilaza izy fa ankehitriny eo ambanin'ny fironana tampon'ny karbaona, ny fivarotana fiara mpitondra angovo vaovao dia miakatra, antenaina hitombo amin'ny 2040, ny fidiran'ny fiara elektrika dia hahatratra 100% amin'ny 2045, amin'ny 2060 dia hitondra famatsiam-bola vaovao amin'ny 2060; ary raha ny angom-baovao momba ny tsena dia mihoatra ny 2060 ny totalin'ny fantsom-batana miisa 500 tapitrisa. Ny fidirana haingana amin'ny fiara elektrika dia lasa lakilen'ny fihenan'ny famoahana gazy karbonika; ampiarahina amin'ny fampandrosoana sy ny fananganana tsena fivarotana karbonika, dia hanohy hitarika ny fampidirana ny indostrian'ny fiara mifono angovo vaovao sy ny teknolojia fanavaozana maitso, hamokatra lanja tsy hita refy.
NEWYEA Group manavao sy manangana rafitra herinaratra vaovao miaraka amin'ny angovo vaovao amin'ny maha vatana lehibe azy, ary manangana rafitra angovo madio sy ambany ary azo antoka ary mahomby. Izy io dia hanambatra ny fanavaozana ny teknolojia sy ny fampidirana ny fahaizan'ny famokarana, ny fitehirizana angovo, ny famahanana ary ny angovo nomerika ary ny fananana herinaratra, ary hitarika ny fanavaozana ara-toekarena sy ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny fampandrosoana ny angovo sy ny karbaona.
Mandritra izany fotoana izany, tamin'ny andro an-tampon'ilay fihaonambe dia nisy tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny orinasa 20 sy oniversite mihoatra ny 20 manerana ny firenena nitsidika ny foiben'ny Groupe NEWYEA ho an'ny fitsidihana sy fifanakalozana. Dr. Lin Guijiang koa dia nanolotra ny fizotran'ny fampandrosoana ny NEWYEA Group nandritra ny taona maro tamin'ny antsipiriany, ary nampahafantatra ireo vokatra mifandraika amin'ny ekolojika mamaly vola manan-tsaina noforonin'ny orinasa. Ireo olona tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny orinasa sy oniversite rehetra dia nanaiky fatratra ny firafitry ny indostria sy ny fampandrosoana ny NEWYEA Group.
Ankoatr'izay, talohan'ny "Internet of Things Wind Direction Carbon Zero Summit", ny faha-2 tamin'ity volana ity, ny Fikambanana fampiroboroboana ny indostria mpamokatra angovo Zhangzhou dia nanatontosa ny fivoriana fankalazana ny tsingerintaona sy ny fivorian'ny filankevitra faharoa voalohany ihany koa. Tamin'io andro io ihany dia nanao tatitra momba ny toe-javatra ivohoan'ny fikambanana fampiroboroboana i Dr.
Fotoana fandefasana: Aug-10-2021
Misokatra: 8:00 maraina - Manakaiky: 17:00 hariva
Adress: 11F, Hesheng Building No. 8, Jinshan Road, Siming District Xiamen, Sina
Ny sampan'ny antoko Xiamen NEWYEA Group w ...
Ny NEWYEA dia manampy an'i Evergrande Xingluo charg ...
Ny filankevi-pikarohana momba ny fampandrosoana nasionaly ...
NEWYEA Group dia nasaina hanatrika ny 20 ...
Newyea Technology dia nandefa ny 14th Shang ...
Raha ilaina, mifandraisa aminay avy hatrany!